रायन एयरको ३५औँ बार्षिकोत्सव भन्दै फेसबुकमा फिसिङ । के हो फिसिङ ? कसरी बच्ने ? – Nepali Tech Blog
रायन एयरले सित्तैमा टिकट दिदैछ भन्दै एकजना साथीले मलाई फोन नै गरेर छिट्टो बुक गरिहाल् नत्र सकिएला भने पछि मैले नि हतार हतार उसले दिएको लिंकमा क्लिक गरेँ । झट्ट हेर्दा साँच्चै नै रायन एयरको अफिसियल डोमेन हो कि जस्तो लागे पनि राम्ररी हेर्ने बित्तिकै यो फेक हो भन्ने थाहा भइहाल्ने रहेछ (के हो डोमेन भनेको ? पढ्नुहोस् ।) । त्यसपछि फेसबुक हेर्दा त यो खुसियालीले उधुम मच्चाउँदै रहेछ । तपाईले याद गर्नु भएको छ या छैन, फेसबुकमा रायन एयरले आफ्नो ३५औँ बार्षिकोत्सवमा फ्रि टिकट दिएको र आफुले पनि पारेको भन्दै खुसी साथ लिंकहरु सेयर भइरहेका छन् । र, मान्छेहरु बधाइ खाइरहेका छन् ।
फेसबुकमा सेयर भइरहेको स्टाटसको नमुना:
मैले सचेत गराउँदै फेसबुकमा स्टाटस लेखेँ
नर्बेमा रहनु भएका नेपाली साथीभाईहरुले रायन एयरमा फ्रि टिकट भन्दै सेयर गरिरहेको ryanair.com-freechance. com वे…
Posted by Ganesh Karki on Monday, August 29, 2016
तर त्यसपछि पनि साथीहरुले यो लिंक सेयर गर्ने क्रम जारी छ ।
अहिले पनि केहि साथीहरु सोही लिंक सेयर गर्दै आफुले टिकट जितेको लेखिरहेका छन् । युआरएल, डोमेन वा लिंक जस्ता प्राबिधिक कुरा थाहा नपाउँनेहरुले पनि यो रायन एयरको फिसिङका बारेमा अलिकति जानकारी लिन चाहने हो भने यो फिसिङ नै हो भन्ने थाहा भइहाल्छ । जस्तै: रायन एयरको ३५औँ बार्षिकोत्सवको अवसरमा फ्रि टिकट दिइएको भनिएको छ तर रायन एयरको स्थापना १९८५ मा भएको रहेछ । यो बर्ष रायन एयरको ३२औँ बार्षिकोत्सव मात्रै हुन सक्छ । तिन बर्ष पछिको खुसियालीमा कसले तिन बर्ष अगाडी उपहार बाड्ला र ? त्यस्तै टिकटमा देखाइएको K सिट रायन एयरमा हुन्न रे । जानकारहरु K नम्बरको सिट पखेटामा होला भन्दै मजाक बनाइरहेका छन् ।
कसरी झुक्किरहेका छन् मान्छेहरु ?
रायन एयरको आधिकारिक वेबसाइट www.ryanair.com हो । झुक्याउँन सेयर भइरहेको वेबसाइटको लिंक चै http://www.ryanair.com-freechance.com/ हो । यो वेबसाइट com-freechance.com डोमेनमा सबडोमेनका रुपमा रहेको छ । यसको डोमेन com-freechance.com मात्रै हो तर चलाखीपुर्वक सबडोमेन बनाएकाले झट्ट हेर्दा रायन एयरकै एउटा पेजको रुपमा देखिन्छ ।
इन्टरनेटमा यो घटना नयाँ होइन । यस्तो क्रियाकलापलाई प्रबिधिको भाषामा फिसिङ (Phishing) भनिन्छ । सजग नहुने हो भने फिसिङले युजरनेम, पासवर्ड थाहा पाएर एकाउन्टहरु ह्याक हुने मात्रै होइन कि बैंकमा राखिएको पैसासम्म सिनित्त पारिदिन सक्छन् । वेबसाइट जस्तै इमेल, एसएमएस जस्ता विभिन्न साधनहरुको प्रयोगबाट फिसिङ गरिन्छ ।
के हो फिसिङ ?
कुनै आधिकारिक वेबसाइट वा संस्थाहरुको नाम वा डिजाइन जस्तै हुबहु नक्कल बनाएर प्रबिधिको दुरुपयोग गर्दै कसैको संवेदनशिल सुचना तथा तथ्यांकहरु प्राप्त गर्ने क्रियाकलापलाई फिसिङ भनिन्छ । यो ठ्याक्कै चारो राखेर माछा समाते जस्तै हो । माछा समात्न बल्छिमा चारो हालेर कुरेर बसे झै यसमा पनि विभिन्न आधिकारिक वेबसाइट वा कम्पनीहरुको लोगो, वेबसाइट, इमेल आदिको नक्कल बनाएर विभिन्न अफर तथा छुटहरुको हल्ला गर्दै मानिसहरुलाई फसाइन्छ । यसको हिज्जेमा केहि फरक भए पनि फिसिङ (Phishing) शब्द माछा समात्नेको अंग्रेजी शब्द (Fishing) बाट लिइएको हो ।
सबै भन्दा पहिले इन्टरनेटमा भएका सबै कुरा सत्य हुन्छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् । कुनै पनि जानकारी प्राप्त भए त्यो जानकारी दिने वेबसाइट कत्तिको आधिकारिक हो भन्ने कुराको खोज गर्नुहोस् । इन्टरनेटमा देखिएका कुराहरुमा लालची नबन्नुहोस् । बुझ्दै नबुझी इन्टरनेटमा राखिएका जस्ता सुकै वेबसाइटमा आफ्नो जानकारी कहिलै नभर्नुहोस् ।
इमेलमा प्राप्त लिंकहरु नखोल्नुहोस् । अफर, छुट र चिठ्ठा परेको जानकारी दिएर मात्रै फसाउँने होइन कि आधिकारिक कम्पनीहरुको जस्तै लाग्ने इमेलबाट हुबहु इमेलहरु पठाएर त्यसमा राखिएका लिंकहरु मार्फतबाट पनि फिसिङ गर्ने गरिन्छ । यसर्थ कुनै पनि इमेलमा भएका लिंकहरु क्लिक गर्नुभन्दा पहिले पठाउँनेको इमेल जाँच गर्नुहोस् । इमेलमा सकभर लिंकमा क्लिक गर्ने भन्दा त्यहाँ भएको युआरएल कपि गरेर ब्राउजरमा खोल्ने गर्नुहोस् ।